Waa Maxay iPhone Update, sidii ay u cusboonaysiiyaan iPhone la / aan Lugood
1.1 Via Lugood / WiFi
1.2 joogaan Most-weydiiyo
2. Soo Celinta iPhone
2.1 Soo Celinta Data
2.2 Via Lugood / iCloud
2.3 Talooyin iyo tabaha
update iPhone macruufka ka dhigan tahay, si aad u cusboonaysiiso u version nidaamka qalliinka hadda aad iPhone. Waxaa jira laba hab oo ay u cusboonaysiiyaan ka macruufka ah ee iPhone. Mid ka mid ah waa Via Wi-Fi, kan kale waa in la isticmaalo Lugood.
Inkastoo, waxaad isticmaali kartaa xidhiidh xog mobile (3G / 4G) si aad u cusboonaysiiso iPhone macruufka laakiin wuu wada baabbi'in doonaa badan oo data, maxaa yeelay, updates yihiin culus oo waqti badan si ay u soo baxdo iyo rakibi qaado. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in loo sameeyo via Wi-Fi. Currently, update ugu dambeeyay ee macruufka la heli karo waa macruufka 9.0.
Iyadoo version macruufka ah si fudud loo updated karo, barnaamijyadooda ku saabsan iPhone sidoo kale loo baahan yahay in si joogta ah loogu daraa. Mar kale, tani waxaa la samayn karaa ayadoo la isticmaalayo network Wi-Fi ama ku xira inay Lugood ka your computer.
Qaybta 1. Waa kuwee iPhone u cusbooneysiin karaa in macruufka 5, iOS6 ama macruufka 7 Qeybta 2: Update iPhone aan Lugood - Isticmaal WiFi Qeybta 3: Update iPhone la Lugood Qeybta 4: Update iPhone adigoo isticmaalaya IPSW Downloader Qeybta 5: Update iPhone Apps
Qaybta 1aad: Waa kuwee iPhone u cusbooneysiin karaa in macruufka 5, iOS6 ama macruufka 7
Ka hor inta la xariirta aad iPhone in dambeeyay macruufka version aad haysato ku hay in qalab aad waa in ay taageeraan ugu danbeeyay ee macruufka version.
macruufka 5: qalabka taageeray
macruufka 5 waxaa lagu taageeray oo kaliya qalabka cusub. IPhone waa in 3GS iPhone ama cusub. IPad kasta ka shaqeyn doonaan. An iPod taabto waa in ay ahaadaan ab ka 3-aad ama cusub.
macruufka 6: qalabka taageeray
macruufka 6 waxaa lagu taageeray oo kaliya on iPhone 4s ama cusub. IPad kasta ka shaqeyn doonaan. An iPod taabto waa in ay ahaadaan ab ka 5aad. macruufka 6 bixisaa taageero xaddidan 3GS iPhone / 4 .
macruufka 7 taageeray qalabka
macruufka 7 waxaa lagu taageeray oo kaliya on iPhone 4 ama cusub. IPad kasta ka shaqeyn doonaan. An iPod taabto waa in ay ahaadaan ab ka 5aad.
Kaan macruufka aad rabto in la gaarsiiyo in, ugu horreeya oo dhan, waxaan soo jeedinaynaa in ay tahay in aad la sameeyo gurmad ah ka hor inta la xariirta iPhone . Gurmad ah ayaa kaa horjoogsata in laga badiyay wixii xog ah ee wax dhacdo tagaa wonky hoos khadka.
Qeybta 2: Update iPhone aan Lugood
Tani waa hab aad u sahlan oo lagu casriyeeyo OS iPhone ee, dhammaan waxa looga baahan yahay kan ka dhexeeya Wi-Fi dhawaaqa. Waxa muhiim ah in maskaxda lagu hayaa ka hor intuusan bilaabin waa in iPhone ee waa in si buuxda u soo oogay. Haddii aan, furaysto il xukun ugu horeysay ka dibna raac tallaabooyinkan:
Socotay, Talooyin iyo tabaha
1. Hubi in habka loo xirxiro aan la kala gooyey ama la joojiyo si aan caadi ahayn ay dhacdo waxa ay soo bandhigi kartaa dhib halis ah.
2. Mid ka mid ah mar walba isticmaali kartaa hab soo kabashada haddii wax qaldamaan inta lagu jiro geedi socodka rakibo. The hab DFU la isticmaali karaa haddii ay dhibaatadu tahay mid ka sii xun.
Tallaabada 1. Tag screen guriga iyo tuubada Settings > General . Tag Update menu Software ah, oo aad iPhone hubin doonaan in ay jirto warbixin laga heli karaa.
Tallaabada 2. Haddii update ah waxaa laga heli karaa, waxa ay heli doonaan ku qoran shaashada. Dooro update aad la doonayo, iyo tubada rakib Hadda doorasho haddii la xariirta in macruufka 7 ama Download iyo rakib doorasho, haddii ay dhacdo in aad la xariirta in macruufka 6.
Tallaabada 3. iPhone weydiin doonaa haddii aad dooneysid in aad kala soo bixi updates ugu badan Wi-Fi, waxaa xaqiijin ka dibna waxa aad ku dhaliyay doonaa in ay ku xidhmaan il ku amraya. Markaas, tuubada heshii muuqata on xaq hoose ee shaashadda. Sida dajinta bilaabmin, baar horumarka buluug muuqan doonaa. Marka dajinta dhameystiray, aad iPhone weydiin doonaa haddii aad doonayso inaad cusboonaysiiso qalabka hadda ama ka dib. Dooro rakib . Shaashadda tegi doonaa madow leh logo Apple iyo bar horumar ah oo ka soo muuqan doonaa mar kale. Marka la rakibo dhameystiray, aad iPhone bilaabi doonaa oo diyaar u ah in ay isticmaalaan.
Qeybta 3: Update iPhone la Lugood
1. Update iPhone OS in macruufka 6
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in computer iyo furi Lugood. Gurmad iyo syncing habka A bilaabo si toos ah. Haddii aan, waxay samayn gacanta.
Tallaabada 2. In geeddi-socodka update ka bilaabaan, guji magacaaga iPhone ee ka mid ah qalabka ku qoran gacanta menu bidix.
Tallaabada 3. Tag oo kooban > Hubi Update > Update . Haddii update ah waxaa laga heli karaa, ogeysiis ah ka Lugood muuqan doonaa. Dooro Download iyo Update .
Tallaabada 4. Haddii baxdo go'aan kasta oo dheeraad ah, sii riixaya Okay . Xirxiro bilaabo si toos ah, aad iPhone bilaabi doonaa marka la dhamaystiro iyo ka dibna aad u isticmaali kartaa.
2. Update iPhone OS in macruufka 7
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in computer via cable USB ah oo la furo Lugood. Gurmad iyo syncing habka A bilaabo si toos ah. Haddii aan, waxay samayn gacanta.
Tallaabada 2. Riix si aad iPhone ka qaybta AALADAHA in gacanta menu bidix.
2. socotay, Talooyin iyo tabaha
Marna ha iloobin in aad dib ilaa xog ku saabsan iPhone hor update ah.
Delete oo dhan barnaamijyadooda aan la isticmaalin ka hor update ah.
Cusboonaysii oo dhan Chine ee hadda jira.
Qeybta 4: Cusboonaysii iPhone adigoo isticmaalaya IPSW Downloader
Tallaabada 1. Download file IPSW aad rabto in aad halkan ka .
Tallaabada 2. Open Lugood. Dooro iPhone ka menu AALADAHA. In guddi Kooban qaban muhiim ah Xulashada iyo guji Update haddii la isticmaalayo Mac ah, ama Qabo muftaaxa Shift oo guji Update haddii la isticmaalayo PC ah
Tallaabada 3. Hadda dooro file IPSW aad. Browse goobta download, dooro file, oo guji Dooro. Qalab aad u cusbooneysiin doonaa sida haddii faylka la soo bixi dhex Lugood.
Qeybta 5: Update iPhone App
Horumarinta App sii updates mar kale iyo mar kale la sii daayo. Waa in aad rabto in aad sii ilaa taariikhda. Qaybta soo socda ee maqaalka uu sharaxayaa sida aad u cusboonaysiiso Chine ee macruufka 6 iyo 7.
Tallaabada 1. Run Lugood iyo aad aad iPhone xiran cable USB ah.
Tallaabada 2. Laga soo Murayaad navigation bidix, u tag Apps > update gareeyo > Download Free All Updates .
Tallaabada 3. Saxeex ID Apple iyo bilowdo hawsha download.
Tallaabada 4. Ka dib downloadng, aad u hagaagsan kartaa iPhone si aad u hesho ala ah barnaamijyadooda updated in aad iPhone.
Gacanta hubinta casriyeysan oo ag maraya in App Lugood ee Store waa wax aad looga xumaado. In macruufka 7, xanaaq this waxaa looga fogaan karaa by ogolaanshaha aad iPhone si toos ah wuxuu hubinayaa iyo Wararka barnaamijyadooda ka.
IPhone kaabta in Computer si sahlan
Raadi / Change iPhone kaabta Location
11 joogaan Most-weydiiyo oo ku saabsan kaabta iPhone
A Xoog Transfer iPhone Software
Music ka iPhone dhaqaaq Computer
Nuqul Data ka iPhone in Computer
Jailbreak iPhone 4s socda macruufka 7
> Resource > Lugood > A Guide Full on sidii ay u cusboonaysiiyaan iPhone la / aan Lugood